Ukumaketha Okusekelwe Akhawunti ye-Marketo: Okudingeka Ukwazi | Martech Zone
UMarketo ukhiphe eyayo Ukumaketha Okusekelwe Akhawunti (ABM) module njengengxenye yomzamo owandayo wokuxhasa kangcono ubudlelwane bebhizinisi. Ngenkathi ithuluzi uqobo lwalo kunguhlobo lwangaphambilini futhi libonisa isithembiso esikhulu, kunezindlela ezithile i-ABM esethwe ngazo ukuguqula amabhizinisi aqala ukusebenzisa ipulatifomu. UMarketo uchaza izinto ezintathu ezihlukile zesisombululo se-ABM:
Amandla wokukhomba nokuphatha ama-akhawunti nohlu lwama-akhawunti.
Amandla wokubandakanya ama-akhawunti akhokhelwe kuziteshi zonke.
Amandla wokulinganisa umthelela wemali kuma-akhawunti akhonjiwe
AbakwaMarketo iphepha elimhlophe ku-ABM linikezela izinzuzo ze-ABM ukwenza ngcono ukumaketha kwe-ROI, ukushayela imali ekhonjisiwe, ukukhiqiza ukuguqulwa okuningi, ukukhiqiza imikhondo efanelekile nokuvumelanisa ukuthengisa nokumaketha.
Abathengisi abangama-84% bathi amasu e-ABM adlula olunye utshalomali lokumaketha ngokwe-ITSMA
I-97% yabakhangisi ithole i-ROI ephakeme nge-ABM kunanoma yiziphi ezinye izindlela zokubamba iqhaza ngokusho kwe-Alterra Group
Ama-92% wabakhangisi be-B2B emhlabeni wonke abheka i-ABM ngokweqile noma ebaluleke kakhulu emizamweni yabo yonke yokumaketha ngokweSirius Decisions
Ingeniso engama-208% eyengeziwe yenziwa ukumaketha ezinkampanini eziqondanise amaqembu okuthengisa nawokumaketha ngokwe-MarketingProfs
Ukwenza izinqumo zebhizinisi libe linye
Njengoba ubuchwepheshe bokumaketha buqhubekile, futhi nekhono kanye nobuchwepheshe bezobuchwepheshe bokumaketha bokuphayona, izinhlelo abantu abangaziqamba futhi bazisebenzise ngempumelelo ziye zaba nzima ngokwengeziwe. Irekhodi elijwayelekile lokuhola / lokuxhumana linezinkambu eziyi-100 noma ngaphezulu, ngenkathi ukusetshenziswa okujwayelekile namuhla kungafaka ukugeleza kokusebenza okuhlanganisiwe okungu-300-500.
I-ABM kaMarketo iyindlela yokugxilisa izinqumo ezibhekiswe ku-akhawunti yazo zonke izidingo zokumaketha zenkampani. Idizayini ye-ABM iyisinyathelo sokuziphendukela kwemvelo samathuluzi wokumaketha ngokwesiko ahlinzekele ngezinsizakusebenza ezinhle kakhulu zokuqoqa nokukhomba ngaphakathi kwethuluzi kepha bavame ukubanzima ukwabelana ngalolo lwazi namanye amathuluzi.
Ukuthatha izinqumo ngamasu okuphakathi kuzoqinisekisa ukuthi inkampani ikwazi ukugcina ukuhleleka kwayo kwangaphakathi nokuthi izinkampani zingakwazi ukuzivumelanisa ngokushesha nezimakethe eziguqukayo.
The ukungqubuzana phakathi kweSales and Marketing indala njengesikhathi uqobo. IMarketation Automation iveze isithembiso sokuxazululwa kwalokhu kungqubuzana nokwethulwa kweChief Revenue Officer - Iphupho lenhlangano edidiyelwe kanye kuqondaniswe neqembu lezentengiso nezentengiso ukukhuluma ulimi olulodwa nokusebenzela ukuthola inhloso eyodwa.
Ngokudabukisayo, lesi sithembiso kube nzima ukusifeza esikhaleni sobuchwepheshe bokumaketha. Lezi zinkampani zasiqonda isidingo sokuqondanisa futhi zaze zakha amathuluzi ahlukile ngaleyo njongo, kepha kaningi zazama ukudonsa ukuthengisa kuhambisane nokumaketha, Babona uphondo ubheke phansi.
Ulimi lwe-ABM lululimi lweSales, oludluliselwe ngokucacile kuMarketing.
Lokhu kuguqulwa kombono kuthembisa ukukhuthaza ukubambisana okukhulu kufinyelele ezinhlosweni ezabiwe, nezamukelwe ngokuhlanganyela. I-ABM kaMarketo ihlose ukuhlinzeka ngedeshibhodi eyabiwe, yokulinganisa okwabiwe, kwezinjongo ezabiwe.
Ukuqonda Inqubo Ye-Meta-Sales
Umjikelezo wokuthenga we-B2B ngumjikelezo oyinkimbinkimbi ovame ukufaka ababambiqhaza abaningana bamazinga ahlukene okubaluleka enkampanini. Umjikelezo wokuthenga ungaba mude, futhi ijubane alihambisani nhlobo. Ngaphandle kwalokhu, imodeli yakudala yokuThengisa nokuMaketha ephathelene nenkampani eqondiwe isuselwa kumuntu ngamunye. Kwesinye isikhathi kungahle kusekelwe kubantu abaningi, kepha kuyaqabukela ukuthola abantu abakwaziyo ukuqapha bonke ubudlelwano nanoma ikuphi okubonwayo.
Uma wake wasebenzisa iSalesforce, mhlawumbe ujwayelene namagama afana nalawa Umenzi wesinqumo, umthelela, Futhi iqhawe - Bonke laba bantu badlala izindima ezibalulekile ekusizeni ithuba lokuthi liphenduke ikhasimende, kepha ngamunye unendima ehlukile futhi nezinga lokubaluleka liyahlukahluka kuye kwelinye.
Ngaphezu kwalokho, akubona bonke laba bantu abakhonjwayo ohlelweni lwakho, futhi uma uchitha sonke isikhathi sakho uzama ukuthonya umenzi wesinqumo enkampanini elindelekile, uzosheshe ufunde ukuthi banesikhathi esincane kakhulu sokuqiniseka.
Indlela ye-ABM ihlose ukunweba ingxoxo idlule iphuzu lokuqala lokuxhumana, futhi nangaphezu kokuxhumana nabantu obakhombile. Ihlose ukwakha ulimi olufanayo lwama-akhawunti amasu nokuxhumana nanoma ngubani ongakhonjwa njengengxenye yalawo ma-akhawunti.
Ngaphezu kwalokho, indlela ye-ABM izokwelula indawo okugxilwa kuyo uSale, ukuze baziswe ngemisebenzi ebalulekile ephathelene okungabalulekile kangako oxhumana nabo ngaphakathi kwe-akhawunti elindelekile, ebanikeza ukuqonda kohlangothi olumnyama olwalufihliwe lwenqubo yokuthenga, kanye nemininingwane engenzeka ukusiza ukuthola lokho kuqonda.
Ukudalula: Izithombe zinikezwe ngu- Marketo.
Tags: abmabm roamasu e-abmukumaketha okusekelwe ku-akhawuntib2bumjikelezo wokuthenga we-b2bukuthengiswa kwe-b2bg8techniologicalumabhebhanaumarketo abm
Ungalinganisa Kanjani Ukusebenzelana Kwakho Komphakathi Okuku-inthanethi Ngokuphumelelayo
1WorldSync: Ulwazi Lomkhiqizo Othenjwayo Nokuphathwa Kwedatha